दूषित पानी पिउँदै शङ्करपुरबासी » खबरहरुको एउटै केन्द्र
दूषित पानी पिउँदै शङ्करपुरबासी
मंगलवार, चैत्र ८, २०७३ ०५:४३ मा प्रकाशित !
८ चैत, बैतडी। बैतडीको सुर्नया गाउँपालिका–६ शङ्करपुरका स्थानीय बासिन्दा पुस्तौँदेखि कुलोको दूषित पानी पिउन बाध्य भएका छन । सुर्नया गाउँपालिका–६ शङ्करपुरका करिब १०० घरपरिवार कुलोको दूषित पानी पुस्ताँैदेखि पिउँदै आएका हुन । शङ्करपुरको नन्दिना, धुलिधार र कुनेटमा खानेपानीको चरम समस्या रहेको स्थानीय जयराज अवस्थीले जानकारी दिए ।
बाजेको पालामा सिँचाइका लागि निर्माण गरिएको कुलोबाटै आएको पानी दैनिकरुपमा प्रयोग गर्न बाध्य भएको नन्दिनाका जयन्ती अवस्थीले जानकारी दिए । उनले भने, “नजिक पानीको मुहान नहुँदा कुलोकै दूषित पानी पिउन बाध्य छौँ ।”
यस्तै, कुनेटामा पनि खानेपानीको निकै समस्या भएको स्थानीय हरिदत्त अवस्थीले जानकारी दिए । उनले भने, “कुलोको दूषित पानी पुस्तौँदेखि पिउँदै आएका छौँ ।”
सुर्नया–६ कै धुलिधारमा रहेको एउटै मुहानमा पनि पानी सुक्न थालेको स्थानीय कृष्णदत्त अवस्थीले जानकारी दिए । उनले भने, “धुलिधारमा रहेको पानीको मुहान पनि सुक्दै गएको छ ।” त्यस ठाउँका करिब १०० घरधुरी वर्षौंदेखि कुलोको दूषित पानी पिउन बाध्य भएपनि गाविस तथा अन्य सरोकारवाला निकायले कुनै चासो नदिएको स्थानीय बासिन्दाले आरोप लगाएका छन ।
PREVIOUS POST Previous post: २१ मार्च आज विश्व कविता दिवस
NEXT POST Next post: आइजिपी मुद्दाको फैसला आज हुने
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते मंगलवार, चैत्र ८, २०७३ ०५:४३
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस मंगलवार, चैत्र ८, २०७३ ०५:४३
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण मंगलवार, चैत्र ८, २०७३ ०५:४३
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी मंगलवार, चैत्र ८, २०७३ ०५:४३
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? मंगलवार, चैत्र ८, २०७३ ०५:४३